HGH ထိုင်းဆေးဆိုင် - တိုးတက်မှုနှုန်းဟော်မုန်းအပေါ်အပိုဒ်
HGH ထိုင်းနိုင်ငံက ဇန်နဝါရီလ 10, 2018
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် HGH (somatotropin)
ကြီးထွားဟော်မုန်း (somatotropin) - ထိုင်းနိုင်ငံအတွက်အားကစားသမားများ, ကာယဗလနှင့်အခြားခရီးသွားဧည့်အကြားလူကြိုက်အများဆုံးတစ် pharmacological အေးဂျင့်သည်။ ယခင်ကဟိုအဖြစ်, somatotropin ယခုအားကစားသမားများ, ကျွမ်းဘားနှင့်ဂိမ်းကစားနည်းများကိုယ်စားလှယ်များပင်ပိုမိုတက်ကြွစွာကာယဗလထက်အသုံးပြုရန်သာကာယဗလ, အလေးမနှင့် musculature ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်ပတ်သက်သောအခြားအားကစားအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။
Somatotropin ဒဏ်ရာများ၏ကုသမှုကောင်းစွာသက်သေပြတိုးပွားလာခံနိုင်ရည်များအတွက်ကောင်းတစ်ဦး tool ကိုဖွစျဖို့သက်သေပြခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ဤမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏နယ်ပယ်အဆက်မပြတ်ကြီးထွားလာနေပါတယ်။ အဆုံး၌, ကျွမ်းကျင်စွာ, ဒီထုတ်ကုန်သုံးပြီးသင်တစ်ဦးနုပျိုအားကစားသမားတွေရဲ့တိုးတက်မှုနှုန်းတိုးမြှင့်နိုင်ပါတယ်, ဤသည်လည်းအရေးပါသည်နှင့်တစ်ဦးသတ်သတ်မှတ်မှတ်ဆွေးနွေးချက်ထိုက်တန်ပါတယ်။
အဘယ်ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်တစ် somatotropic ဟော်မုန်း (HGH) လိုအပ်ပါသလဲ? Soma ခန္ဓာကိုယ်ကိုဆိုလိုသည်။ Somatotropic "tropism" ရှိခြင်းကိုဆိုလိုသည် - ခန္ဓာကိုယ်အနေနဲ့ဆှဖှေဲ့။ ကိုယ်ခန္ဓာ၏တိုးတက်မှုနှုန်းစဉ်အတွင်း somatotropin အဓိကတိုးတက်မှုနှုန်းအချက်တခုဖြစ်ပါသည်။ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကြီးထွားတိုက်ရိုက်နှစ်ဦးစလုံးအရှည်နှင့်အကျယ်အတွက်၎င်း၏အရေအတွက်ပေါ်မူတည်ပါသည်။ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပို somatotropin, ပိုပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးပေါက်နေသည်။
ပြီးနောက်အရိုးစု၏အရိုးထဲမှာ cartilaginous တိုးတက်မှုနှုန်းဇုန် ossify နှင့်အရှည်မှတ်တိုင်များအတွင်းရှိအရိုးကြီးထွားမှု, အခြို့သောအချိန်များအတွက်အထူအတွက်အရိုးကြီးထွားနေဆဲရှိသေး၏။ အရိုးစုအချို့ကိုအစိတ်အပိုင်းများမှာတိုးတက်မှုနှုန်းဇုန်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏အသက်တာတစ်လျှောက်လုံး ossification အကြောင်းမဲ့မဟုတ်။ တိုးတက်မှု၏ထိုသို့သောဒေသများအောက်ပိုင်းမေးရိုး, နှာခေါင်း, လက်ခြေအတွက်ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ကြသည်။
ကြီးထွားဟော်မုန်း၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုအလွန်တိုးတက်နေပါတယ်။ ထိုအခါတခါတရံ2မီတာထက်ပိုမိုအမြင့်ကရောက်ရှိရာကုမ္ပဏီကြီးများ, မပေါက်ပါဘူး။ ဤအခြေအနေမှတစ်ဦးရောဂါစဉ်းစားသည်ကခေါ်တော်မူရဲ့ "အလွန်ကြီးမားသော။ " ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကမ္ဘာဂြိုလ်ပေါ်မှာလူအတော်များများသို့သော်မဟုတ်ကုမ္ပဏီကြီးများ, ဒါပေမယ့်ကိုယ့်မြင့်မားတဲ့လူမျိုးဖြစ်ရန်အလွန်ကျေနပ်ပါလိမ့်မယ်။ အတော်များများကမိဘများကသူတို့သားသမီးများ၏ကြီးထွားမှုကိုတိုးမြှင့်ဖို့လိုနှင့်ယခုပြီးသားဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
စကားမစပ်အစဉ်အဆက်ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်နေထိုင်ခဲ့သည့်အမြင့်ဆုံးအချင်းလူသား,2မီတာ 48 စင်တီမီတာတစ်ခုတိုးလာပါသည် (!) ။ တိုးတက်မှုဇုန်အများစုပြီးသားပိတ်လိုက်သောအခါအရွယ်ရောက်ပြီးသူခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပြီးသားသိသိသာသာကြီးထွားဟော်မုန်းတိုး၏တခါတရံလျှို့ဝှက်ချက်များ။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, လူတစ်ဦးရဲ့အနိမ့်မေးရိုး, နှာခေါင်း, လက်ခြေကိုသိသိသာသာစိုက်ပျိုးကြသည်။ ဤအခြေအနေမှကိုယ်ခန္ဓာ၏အရံအစိတ်အပိုင်းများအတွက်ဆိုလိုသည်မှာတိုး, acromegaly ဟုခေါ်သည်။ လူကြီးနှင့်အပြည့်အဝကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ခန္ဓာကိုယ်၌, somatotropin ဟိုလုပ်ဆောင်ချက်များကိုလုပ်ဆောင်တယ်။
ဒါဟာချွင်းချက်မပါဘဲအားလုံးကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများနှင့်တစ်ရှူးများတွင်ပရိုတင်းပေါင်းစပ်၏လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက်တာဝန်ရှိသည်။ လူအနည်းငယ် HGH ပေါင်းအရာအားလုံးကိုလည်းစိတ်ဖိစီးမှုဟော်မုန်းကြောင်းကိုငါသိ၏။ စိတ်ဖိစီးမှုအောက်, သွေးထဲတွင်ထိုအသွေးကိုဂလူးကို့စအဆင့်ကိုသိသိသာသာမြင့်တက်, ဤအဓိကအားဆဲလ်များ၏စွမ်းအင်အဆောက်အဦထဲမှာပရိုတင်းပေါင်းစပ်တိုးမြှင့်ခြင်းအားဖြင့်ရှုံးသောအခါအခြေအနေလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ခန္ဓာကိုယ်ကူညီပေးသည်။
ထို့ကြောင့်, ယေဘုယျအားဖြင့်အကောင်းတစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့အရိုးစုနှင့်အတူခိုင်မာသောဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကလူပိုကောင်းကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာ၏ဖိစီးမှုနှင့် vicissitudes အမြိုးမြိုးဖွငျ့သည်းခံနေကြတယ်။ သူတို့ဟာ somatotropin ဖွငျ့ဤအတွက်အကူအညီပေးခဲ့ကြသည်။ အောက်ပိုင်းမေးရိုး, နှာခေါင်း, လက်ခြေ၏တိုးတက်မှုဇုန်ပိတ်ထားဘယ်တော့မှနေကြသည်ကတည်းကဤ "အစိတ်အပိုင်းများကို" ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမပေါက်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်ပင်အသက်ကြီးမှာကိုသူတို့ 5-8 မီလီမီတာခြင်းဖြင့်ပျမ်းမျှအားဖြင့်အနည်းငယ်မပေါက်ပါဘူး။
အဲဒီမှာသို့သော်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သူတို့ရဲ့ခြွင်းချက်, အငြိမ်းစားအသက်, နှာခေါင်းနှင့်လက်သီးမှာပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ဝှမ်းပြက်လုံးတစ်ခုစဉ်ဆက်မပြတ်ဘာသာရပ်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရသောတစ်ဦးမဟုတ်ဘဲအထင်ကြီးအရွယ်အစား, ရောက်ရှိဖို့။ ထိုင်းနိုင်ငံအတွက်အကြီးစားလေ့လာမှုများလူငယ်တစ်ဦးသည်အသက်မှာတိုးတက်မှု၏ပြီးစီးပြီးနောက်နောက်ဆက်တွဲဘဝစဉ်အတွင်းလူတစ်ဦးနေဆဲအနည်းငယ် "ထပေါက်နေသည်။ " အဲဒီပြခဲ့ကြ ဒါပေမဲ့ဒီတိုးတက်မှုနှုန်းအနည်းငယ်သာဖြစ်ပါတယ်။ 60 များ၏အသက်အရွယ်အားဖြင့်, လူသည်ကြာမြင့်စွာနှင့်အတူတူပင် width ကိုအကြောင်းကို 8-10 မီလီမီတာပေါက်နေသည်။
ဒါဟာကြီးထွားမှု, သို့သော်ကြောင့်လူအများစုအတွက်ဒီအသက်အရွယ်မှလာသောကြွက်သား၏ကျိုးပဲ့လျက်နှင့်အားနည်းမှမမြင်ရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ငယ်စဉ်ကလေးဘဝအတွက်တိုးတက်မှုနှုန်းဟော်မုန်းတစ်ခုမရှိခြင်းနှင့်အတူ, လူတွေအလွန်သေးငယ်တဲ့ကြီးထွား, သူတို့လူပုဟုခေါ်ကြသည်။ ဆေးသမား၏ဘာသာစကားကိုအတွက်, ဒီအခွအေနေ "hypophysial nanism" ဟုခေါ်သည်။ ပုံမှန်ကြီးထွားမှုတစ်ခုအရွယ်ရောက်ပြီးသူများတွင်တိုးတက်မှုနှုန်းဟော်မုန်းတစ်ခုလိုငွေပြမှု၏ရှေ့တော်၌, dystrophy အမျိုးမျိုးတစ်ခါတစ်ရံတွင်ပင်သေခြင်း၌အဆုံးသတ်အရာ, ဖွံ့ဖြိုး, ဒါပေမဲ့သူတို့အလွန်ရှားပါးဖြစ်ကြသည်။ သူ့ဟာသူခုနှစ်, အမည် "hypophysial nanism" ပြီးသားကြောင်း somatotropin အဆိုပါ pituitary gland အတွက်ထုတ်လုပ်အကြံပြုထားသည်။
အဆိုပါ pituitary gland ယခုအားလုံးနီးပါးအားလုံးသိတယ်သို့မဟုတ်ကဘာလဲ။ အဆိုပါ pituitary gland အောက်ပိုင်းနှောက် appendage, ဦးနှောက်၏အခြေစိုက်စခန်းအပေါ် outgrowth ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ pituitary gland များ၏အသွင်သဏ္ဌာန်နှင့်အရွယ်အစားချယ်ရီဆင်တူပါသည်။ အဆိုပါ pituitary gland ကောင်းစွာယင်း၏ပျော့အားနည်းချက်များ၏အစွမ်းသတ္တိကာကွယ်ထားသည်။
ဦးခေါင်းခွံ၏အခြေစိုက်စခန်းအပေါ် "တူရကီကုန်းနှီး" - ဒါဟာခိုင်မာတဲ့အရိုးအမှု၌တည်ရှိသည်။ အဆိုပါ pituitary gland အခြားဟော်မုန်းထုတ်လုပ်နေကြပြီး - သိုင်းရွိုက်-လှုံ့ဆော်ခြင်း (သိုင်းရွိုက်ဂလင်းထိခိုက်) ဟော်မုန်း, Adreno corticotropic (ထို adrenal ဂလင်းမြှင့်လုပ်ဆောင်), gonadotropic (လိင်ဂလင်းမြှင့်လုပ်ဆောင်), နှင့်အခြားသူများ။
အဆိုပါ pituitary ၏လုပျငနျး hypothalamus, အ midbrain ၏အထူးဧရိယာအားဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသည်။ အဲဒီမှာ liberins နှင့်ုင်ဖွံ့ဖြိုးလျက်ရှိသည်။ somatotropic ဟော်မုန်းအဘို့, somatoliberin နှင့် somatostatin အရေးကြီးလှသည်။ Somatoliberin hypothalamus အဆိုပါ pituitary gland အားဖြင့်လျှို့ဝှက် ofgrowth ဟော်မုန်းတိုးပွားစေပါသည်။ Somatostatin, ဆန့်ကျင်ပေါ်, somatotropin များ၏ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်။ ကျနော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကြီးထွားဟော်မုန်းပမာဏကိုတိုးမြှင့်ဖို့လိုလျှင်, ထို့နောက်သူက somatoliberin ပမာဏကိုတိုးမြှင့်ဖို့, ဒါမှမဟုတ် somatostatin ပမာဏကိုလျှော့ချဖို့ဖြစ်စေလိုအပ်ပေသည်။
အချိန်ကြာမြင့်စွာကကြီးထွားဟော်မုန်းသူ့ဟာသူကြွက်သားတစ်သျှူး, အရိုးနုနှင့်ပြည်တွင်းရေးကိုယ်တွင်းအင်္ဂါပေါ်သရုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းယုံကြည်ခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်ဤဒါမဟုတျကွောငျးထွက်လှည့်။ HGH ဇီဝကမ္မထက်ပိုမိုမြင့်မား 2,000 အကြိမ်ပြင်းအားသာစသည်တို့အတွက်ဆဲလ်တွေထိခိုက်စေနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ပုံမှန်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ, HGH တစ်ခုတည်းကိုသာအသည်းအပေါ်ပြုမူ။
အသည်းကိုလည်း somatomedin သမုတ်သောအနေနဲ့အင်ဆူလင်ကဲ့သို့သောစီးပွားရေးတိုးတက်မှုအချက်, ထုတ်လုပ်ပေးသည်။ Somatomedin - ကိုလည်းပစ်မှတ်ဆဲလ်တွေထိခိုက်တစ်ဦးဟိုနှင့်ကြီးထွားအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ တစ်ဦးပြင်းထန်အသည်းရောဂါပြီးနောက်ထိုသူငယ်ကြီးထွားလာရပ်နှင့်ကဲ့သို့သောရောဂါ somatomedine တစ်မရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်ပေမယ့် pituitary nanism မှအလားတူအခြေအနေဖြစ်ပေါ်သည့်အခါတစ်ဦးဆရာအဖြစ်ကျွန်မမကြာခဏဖြစ်ပွားမှုကိုကြည့်ပါ။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, acromegaly သွေးထဲမှာဂလူးကို့စများ၏ပုံမှန်အဆင့်ဆင့်နှင့်အတူဘုံဖြစ်ပါတယ်။ ဤကိစ္စတွင်အတွက်ရောဂါသွေးထဲတွင် somatomedine တစ်ခုအလွန်အကျွံအဆင့်ကိုခံစားရစေပါသည်။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းယေဘုယျအားဖြင့်အရိုးကြွက်သားမှလျှောက်ထား somatotropic ဟော်မုန်းတွေနဲ့ဟို၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၏ကွင်းဆက်ဖြစ်ပါသည်:
ကျနော်တို့အနေနဲ့ဟိုအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိချင်လျှင်, ကျနော်တို့လုပ်နိုင်, ကြွက်သားဆဲလ်တွေပေါ်လို့ပြော:
1 ။ အဆိုပါ hypothalamus အတွက် somatoliberin ပမာဏကိုတိုးမြှင့်။
2 ။ somatostatin ပမာဏကိုလျှော့ချပါ။
3 ။ ခန္ဓာကိုယ် STG သို့ထည့်သွင်းပါ။
4 ။ ခန္ဓာကိုယ် somatomedin သို့မိတ်ဆက်ပေး။
ဤအမှုကိစ္စ၏တစ်ခုခုမှာတော့နောက်ဆုံးရလဒ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မည်။ တဖန်သင်တို့နှစ်ဦးစလုံးလိုအပ်သောပြင်ပကနေအချက်များနှင့်သက်ရှိသူ့ဟာသူဖြင့်၎င်း၏ထုတ်လုပ်မှုကိုလှုံ့ဆော်ဖို့ဒလမ်းကြောင်းကိုလျှောက်တွင်မိတ်ဆက်များ၏လမ်းကြောင်းကိုလျှောက်ရှိသွားနိုင်ပါတယ်။ သငျသညျဆဲတိုးပွားလာ၏လမ်းကြောင်းအပေါ်သွားနိုင်ပါတယ်
လိုအပ်သောအာဟာရမှဆဲလ်များ၏ sensitivity ကို, သို့သော်ဤစကားပြောဆိုမှုလာသေးသည်။ ရဲ့ somatotropin စည်းမျဉ်း၏တပြင်လုံးကိုကွင်းဆက်မှာပိုပြီးနီးနီးကပ်ကပ်ကြည့်ရအောင်
လူအပေါင်းတို့ somatotropin.After နှင့်အတူဤကုသမှုကိုစတင်ပါက, သမိုင်းရှုထောင့်, အကအားလုံးကိုကစတင်ခဲ့သည်။ STG တစ်ဦး peptide ဟော်မုန်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ 191 အမိုင်နိုအက်ဆစ်အကြွင်းအကျန်ပါဝင်သောလုံလုံလောက်လောက်ကြာမြင့်စွာကွင်းဆက်အမိုင်နိုအက်ဆစ်များပါဝင်ပါသည်။ သူတို့ bovine pituitary ဂလင်း၏ anterior ပေါ်၌ရှိသောအမြှေးတစ်ရေနံစိမ်းထုတ်ယူမိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာအဖြစ်အစောပိုင်း 1921 အဖြစ်, တိရိစ္ဆာန်များအပေါ်စမ်းသပ်ချက်အတွက် physiologists စမ်းသပ်အလွန်ကြီးမားသော evoked ။ ကျနော်တို့တွေ့မြင်နိုင်သည်နှင့်အမျှလူငယ်တစ်ဦးသက်ရှိများ၏ကြီးထွားမှုကိုတိုးမြှင့်ဖြစ်နိုင်ခြေပြီးသားအချိန်ကြာမြင့်စွာသက်သေပြလျက်ရှိသည်။
တိရိစ္ဆာန်မူရင်းသန့် somatotropin ပထမဦးဆုံး 1944, uman အတွက်အထီးကျန်ခဲ့ - 1956 ၌တည်၏။ တောင်မှထို့နောက် STH ၏အကူအညီနှင့်အတူ, တသမတ်တည်းရလဒ်ကောင်းတန်ခိုးနှင့်အဓိကနဲ့ကုသခံရဖို့စတင်ခဲ့နှင့်အတူ dwarfs ။ နောက်ပိုင်းတွင်ကြောင့် STH အနည်းဆုံးသုံးပုံစံများကွဲပြားခြားနားသောမော်လီကျူးအလေးနှင့်အတူရှိကွောငျးတှေ့ရှိခဲ့သညျ။ လူသားမြားသညျတှငျ, STH အဆိုပါ pituitary gland ၏ဒါခေါ် eosinophilic ဆဲလ်တွေထုတ်လုပ်နေပါတယ်။
လူ့တိုးတက်မှုနှုန်း2မီတာထက်အများကြီး သာ. ကြီးမြတ်သည်လာသောအခါ eosinophilic ဆဲလ်ကင်ဆာများတွင်စည်းကမ်းအဖြစ်, အလွန်ကြီးမားသောအဲဒီဖြစ်ရပ်ဖွံ့ဖြိုး။ ဆေးပညာ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ဤအဆင့်မှာထိုကဲ့သို့သောမြင်းသရိုက်အနာကိုအောင်မြင်စွာနှစ်ဦးစလုံးဆေးပညာနှင့်အော်ပရေတာကုသနေကြသည်။ မြင့်မားသောကြီးထွားမှု, သို့သော်နေဆဲဖြစ်သည်။ အဆိုပါကမ္ဘာ့အဆင့်မီဘတ်စကက်ဘောကစားသမားများထဲတွင်သူတို့၏နုပျိုနှစ်များတွင် pituitary ခွဲစိတ်တဲ့သူများစွာသောလူရှိပါတယ်။
ဘာမျှမဖြစ်ပျက်ခဲ့လျှင်အတိုင်းအကျိတ်, (!) နှာခေါင်းမှတဆင့်ဖယ်ရှား, ထိုလူတဦးအသက်ရှင်တော်မူသည်ဖြစ်ပါတယ်။ inoperable အမှုပေါင်းသို့သော်ရှိပါတယ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, သူတွေဟာ "အရွယ်ရောက်" ကစားသမားအရေအတွက်ကိုလူငယ်တစ်ဦးသည်အသက်မှာတိုးတက်မှုနှုန်းတိုးမြှင့်ဖို့ကြီးထွားဟော်မုန်းတွေနဲ့ထိုးသွင်းခဲ့သည့်, ကြီးထွားလာနေပါတယ်။
ထိုအသွေးသို့ကြီးထွားဟော်မုန်း၏လျှို့ဝှက်ချက်များ pulsed ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နေ့တာအတွင်း 6-9 ကြီးမားသောထိပ်, စည်းကမ်းအဖြစ်ရှိပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သောထိပ်အရေအတွက်တခါတရံ 12 ရောက်ရှိ။ အဆိုပါထိပ်၏အမြင့်ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူအိပ်ပျော်နေစဉ်အတွင်းတိုးပွားစေပါသည်။ အစားအသောက်မှာ somatotropin များလွှတ်ပေးရန်၏ထိပ်အမြင့်ကား, ဆန့်ကျင်ပေါ်, ဒီအစားအစာကိုဘိုဟိုက်ဒရိတ်ဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်လျှင်, လျော့နည်းစေပါသည်။
အားလုံးနို့တိုက်သတ္တဝါများ၏ STG အတူတူပင်ဇီဝတက်ကြွစွာနျူကလိယရှိပါတယ်။ Phylogenetic နိမ့်တိရိစ္ဆာန်မျိုးစိတ်ပိုမိုမြင့်မား GHGs တုံ့ပြန်, ဒါပေမယ့်နိမ့်မျိုးစိတ် STG ပိုမိုမြင့်မားမျိုးစိတ်အပေါ်ပြုမူကြပါဘူး။ လူ့ STG ဥပမာ, တိရိစ္ဆာန်များအမျိုးမျိုးတို့ကိုအပေါ်ပြုမူ, ဒါပေမယ့်လူတစ်ဦးလျင် somatotropin တိရစ္ဆာန်များ၏အဘယ်သူမျှမပြုမူ။
STG မျောက်ညျလူသားတို့အပေါ် ပို. ပို. လျော့နည်းအဆင့်မြင့်တိရိစ္ဆာန်မျိုးစိတ်အပေါ်ပြုမူ, ဒါပေမယ့်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ အဆိုပါဝေလငါး၏ STG ကိုထပ်စသည်တို့ကိုပေမယ့်မသာလူသားတစ်ဦးသို့မဟုတ်မျောက်အပေါ်တစ်ဦးအနိမ့်အဖွဲ့အစည်းတိရိစ္ဆာန်များအပေါ်ပြုမူပါလိမ့်မယ်